राजनीतिले शिक्षा क्षेत्र संक्रमित छ : केदारनाथ खनाल – Chitwan Post
राजनीतिले शिक्षा क्षेत्र संक्रमित छ : केदारनाथ खनाल
गोरखामा जन्मेर भरतपुर १०, चौबीसकोठीमा स्थायी बसोवास गर्ने केदार नाथ खनाल शिक्षाशास्त्र र मानविकीमा स्नातकोत्तर तह र संस्कृतमा शास्त्रीसम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनी भानु द्विशतवार्षिकी समारोह समिति चितवनका संयोजक, गोरखा चितवन समाजका सल्लाहकार, रामेश्वर पुस्तकालय क्षेत्रपुरका सल्लाहकार, नेपाल स्काउट चितवनका सल्लाहकार हुन् ।
विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध खनाल विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानहरुबाट समेत पुरस्कृत र सम्मानित भएका छन्, जसमा भानु द्विशतवार्षिकी समारोहको स्वर्णपदक एवं सम्मान, विशिष्ट नागरिक सम्मान (सन् २०१८), लायन्स क्लब अफ नारायणगढ दियालोद्वारा शिक्षा र साहित्यमा योगदान गरेबापत् प्राप्त सम्मान, राष्ट्रिय शिक्षा समिति (शिक्षा दिवस २०४४)द्वारा शिक्षा सेवा पदकबाट पुरस्कृत, पल्लव साहित्य सम्मान (२०६६), हाम्रो मझेरी साहित्य सम्मान (२०७२), देवखिना स्मृति पुरस्कार (२०७२), विशिष्ट शैक्षिक योगदान सम्मान (२०६४), बालकुमारी कलेजबाट कदरपत्र (२०७१) लगायतका छन् । खनालका प्रकाशित कृतिहरुमा यात्राका स्पन्दनहरु (२०६५, नियात्रासंग्रह), शिक्षा : केही गन्थन केही मन्थन (निबन्धसंग्रह), उज्यालोको खोजी (२०७४, कवितासंग्रह), अनुभूतिका शब्द तरङ्ग (कवितासंग्रह), स्मृतिका बिम्बहरु (संस्मरणात्मक निबन्धसंग्रह), दुईधार एक लहर (निबन्धसंग्रह)लगायत छन् ।
नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक भई २५ वर्ष सेवा गरेका खनालले सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा ८ वर्ष सेवा र बालकुमारी कलेजमा प्राध्यापक, बालकुमारी कलेजमै शिक्षाशास्त्र संकायमा कार्यप्रमुखसमेत रही काम गरेका छन् । शिक्षण पेसामा निरन्तर ४१ वर्षसम्म सेवा गरेका खनाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय नेपाली भाषा तथा राष्ट्रिय भाषा शिक्षा विषय समिति २०५७ मा आषाढ २३ देखि ३ वर्षसम्म सदस्य रहेका थिए भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय विशेष आवश्यकता शिक्षा प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा विषय समिति सदस्यका रुपमा उनी कार्यरत थिए । प्रस्तुत छ, साहित्य र समाजसेवामा समेत अग्रणी रहेका बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वसँग चितवन पोष्टले गरेको कुराकानी ।
१) आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ ? केमा व्यस्त रहनुभएको छ ?
— खासै केही छैन । खुसी छु । चिन्ता छैन । लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध थिएँ । आजभोलि साहित्य र लेखनमा व्यस्त छु । उल्लेखनीय नयाँ केही छैन ।
२) यहाँले शिक्षालाई कसरी लिनुभएको छ ?
— शिक्षा मानवसमाजको अभिन्न अंग हो । शिक्षा समयसापेक्ष, मानवलाई मानवजस्तो बनाउने, युगलाई हाँक्न सक्ने, विद्या, बुद्धि र दक्षताले युक्त हुनुपर्दछ । शिक्षा मानवमा चरित्र निर्माण, नैतिक आचरण, आत्मचिन्तन गराउन सक्ने र युगले मागेको काँचुली फेर्न सक्ने हुनुपर्दछ ।
३) अहिलेको हाम्रो शिक्षामा सबैभन्दा पहिले खोजिने विषयवस्तु कस्ता हुन्छन् ? तपाईंको विचार वा अनुभवमा उत्कृष्ट शिक्षामा हुनुपर्ने कुराहरु के–के हुन् ?
—प्रश्न जटिलै भयो । शिक्षाले मानवमा सोच्न र चिन्तन गराउन सक्ने हुनुपर्दछ । चिन्तनमात्रले नहुने हुँदा सीपमूलक र जीविकोपार्जन गर्ने खालको हुनुपर्ने छ । कहाँ कस्तो सीपको आवश्यकता छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर पुरानोलाई छाड्दै उपयोगी, व्यावहारिक, अर्थपूर्णका साथ अनुशासन, नैतिकता र मानवीय गुणलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्दछ । समाज अल्मलिएको छ, शिक्षा निर्माता अल्मलिएका छन् । नैतिक आचरण दिन सकिएको छैन । समाज र राष्ट्रको लक्ष्य हाम्रा दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पठाउने मात्र छ । सरकार पनि हाम्रा दक्ष युवा जनशक्तिलाई विदेश निर्यात गर्ने काममा लागिरहेको छ । विदेशका चरिनङ्ग्रेलाई दक्ष छन् भनी आयात गरिराखेका छौँ । विदेश पलायन मुख्य कारण भएकोले मुलुकको भविष्य अन्धकारमय छ । हाम्रो शिक्षामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा लगानी गर्नेको प्रभाव परेको छ, बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । कोरा शिक्षामात्रै दिनु अर्थपूर्ण हुँदैन, सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिकतालाई पनि जोड्नुपर्दछ । राष्ट्रिय चिन्तन शिक्षाको विकासका लागि हुनुपर्दछ । गन्तव्यको खोजी नगरी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमात्रै परिवर्तन गरेर शिक्षामा उत्कृष्टता आउँदैन ।
शिक्षा बहुक्षमता हासिल गर्ने दिनुपर्ने र शिक्षा मानसिकसँगै शारीरिकरुपमा समेत काममा आउनुपर्दछ । राष्ट्रिय भाषासँगै मातृभाषामा पनि शिक्षा दिनु उपयोगी हुन्छ । शिक्षा सुधारमा वार्ता र छलफलमा नै धेरै समय खर्च भएको छ, यसलाई कम गर्नुपर्छ । शिक्षा सुधार र मुलुकप्रति समर्पित हुने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।
४) हाम्रो अब्बल मानिएको गुणस्तरीय शिक्षाले युवाहरुलाई बेरोजगार बनाइरहेको आरोप लागिरहन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
— शिक्षा कमजोर नै त छैन, त्यसलाई पूर्ण बनाउन सकिएको छैन । नेपालमा उच्च शिक्षा तह हासिल गरेका युवाहरुले विदेशमा राम्रा अवसरहरु पाएका छन् । नाम पनि कमाएका छन् । यहाँ उनीहरुलाई अनुकूल हुने वातावरण नै नबनाएर टिकाउन सकिएन । यहाँ राम्रालाई होइन हाम्रालाई प्राथमिकता दिइयो । सरकारले खुबी र दक्ष भएकालाई यहीँ रोक्ने वातावरणको अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्दछ । अगुवाहरुले नै बिगारेकाले यहाँ प्रतिभाहरु टिक्न सकेनन् । सरकारले फल खाने बेलामा दक्ष युवाहरुलाई विदेश पठाएको छ ।
५) शिक्षाले उच्च शिक्षा हासिल गरेका सक्षम युवाहरुलाई पहिचान दिन नसकेको कुरा समय र परिवेशअनुसार बेलामौकामा खुबै उठ्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
— हामीकहाँ सक्षम युवाहरु धेरै छन् । उनीहरुलाई अवसर दिनुप¥र्यो । युवाहरुका योग्यता र क्षमताको कदर गर्न सक्नुप¥यो । हामीले त्यो वातावरण दिन नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । राम्राभन्दा हाम्रा र पार्टीका झोलेले सक्षम युवालाई असर त पारेको छ नै ।
६) पछिल्लो समयमा हाम्रो शिक्षा प्रगतिशील, गुणस्तरीय र व्यावहारिक भएन भन्ने जनगुनासो ठूलो छ । जनगुनासो कत्तिको जायज छ ?
— शतप्रतिशत सत्य हो र भएकै कुरा हो । हाम्रो शिक्षालाई परिवर्तित समयअनुसार व्यावहारिक रुप दिन सकिएन । गुनासो आउनु स्वाभाविक हो ।
७) शिक्षालाई प्रगतिशील र व्यावहारिक बनाउन हालको शिक्षामा हेरफेर र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु के–के होलान् ?
— धेरै छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति आउनुपर्दछ । त्यो राष्ट्रका लागि हुनुपर्दछ । पार्टी र व्यक्तिका लागि हुन भएन । राष्ट्रको परिचालन गर्नका लागि नै हुनुपर्दछ । शिक्षा नीति १० वर्ष, १५ वर्ष लामो समय टिक्ने स्थिर खालको हुनुपर्दछ ।
८) हाम्रो शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम र अब्बल छ भन्ने कुराहरु पनि आउँछन्, हाम्रो शिक्षामा त्यस्तो विशेषता के छ ?
— राम्राभन्दा हाम्रा व्यक्तिहरु धेरै छन् । यहाँ प्रतिभालाई कदर गर्न सकिएन । राम्रा–राम्रा प्रतिभा भएका नेपालीहरु विदेशमा धेरै छन् । विदेशले हाम्रा दक्ष प्रतिभाहरुलाई प्रयोग गरिरहेको छ । राज्यले सक्षम र खुबी भएका जनशक्तिलाई तान्नुप¥यो र बोलाउनुप¥यो । हाम्रो शिक्षामा मौलिकताको अभाव छैन, यद्यपि पद्धति सही तरिकाले अघि बढेको छैन ।
९) तपाईं किन शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
— शिक्षा नै सबै किसिमको विकासको ढोका उघार्ने माध्यम हो । शिक्षा विकासका लागि सबै तहबाट अगाडि सर्नुपर्दछ । हामीलाई चाहिने शिक्षा व्यावहारिक नै हो । शिक्षाले समाज र राष्ट्रलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ, पछौटेपनबाट सुधारतर्फ अगाडि बढाउँछ ।
१०) पछिल्लो पुस्ताबाट शिक्षा र गुणस्तरमा सुधार कायम गर्न सकिने आधार र आशा के–के छन् ?
— प्रत्येक पुस्तामा पढ्ने र बुझ्ने क्षमता छ । सबैले जन्मजात केही न केही खुबी लिएर आएका हुन्छन्, मात्र तिनीहरुको क्षमतालाई उघार्न अवसर दिए प्रस्फुटन हुन्छ भने वञ्चित गरिए प्रतिभा खुम्चन्छ । बिरूवालाई जति गोडमेल गरिन्छ उति नै सप्रिएर आउँछ । यसैगरी, मानवलाई गोडमेल गर्न शिक्षा चाहिन्छ । स्रोत र साधनको उपलब्धतामा कुन तहको शिक्षा कसरी प्राप्त गर्ने सोको लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्दछ । वर्तमान पुस्तालाई कस्ता जनशक्ति निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा निश्चित मापदण्ड र लक्ष्यहरु हुनुपर्दछ ।
११) नेपालको शिक्षामा कल्पना र इच्छा गरेअनुसार सुधार हुन सकेन, जुन कुरा मानसपटलमा मृगतृष्णाको रुपमा छ । अब शिक्षा सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरु के हुन सक्छन् ?
— शिक्षा र राष्ट्रिय नीतिहरु आवश्यक पर्दछ । सबै कुराहरु नीतिगतरुपमा हुनुपर्दछ । निश्चित उद्देश्यका आधारमा मुलुकलाई गन्तव्यमा पु¥याउनुपर्दछ । राष्ट्रका नीम्ति र कुन तहका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ त्यसको सही किटान र स्पष्ट दिशा निर्धारण गरी गन्तव्य तय गर्नुपर्दछ । निश्चित उद्देश्यका आधारमा नीतिनिर्माण, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
१२) शिक्षाले मानवको व्यक्तिगत जीवन, समाज र राष्ट्रलाई कस्तो प्रभाव छोड्न सक्छ ?
— शिक्षा समाज र राष्ट्रको आमूल परिवर्तनका लागि हो । यो सिर्जनशीलता, व्यावसायिकता र सीपमूलक हुनुपर्दछ । तर, मुलुकका लागि हामीमा चिन्तनशीलताको अभाव छ । शिक्षा स्वयंमा समाधान गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ । यसले नै समाज र मुलुकलाई गति दिन सक्छ ।
१३) शिक्षालाई गुणस्तरीय र मानवमुखी बनाउन यहाँको मह¤वपूर्ण सल्लाह र सुझाव के हुन सक्छन् ?
— शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरी निश्चित मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । शिक्षा विकासका लागि लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । कुन तहका लागि कस्ता नीतिनियमहरु चाहिन्छन्, त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरु खडा गर्नुपर्दछ । योजना बनाएर पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
१४) शिक्षालाई सुधार गर्ने निकायहरुले अबको समयमा के–के गर्नुपर्दछ ? कस्ता कस्ता व्यक्ति कुन कुन स्थानमा रहनुपर्दछ ?
— शिक्षाविद् कतैका बिकाउ हुनुभएन । दातृृ निकायहरुबाट मुलुकका निम्ति कस्तो नीति आवश्यक पर्छ, निष्पक्ष भावबाट सुझाव दिनुपर्दछ । हामी शिक्षाको सुधारका लागि भनी अरु कसैको भत्ता खाएर त्यसै किसिमका नीति खोज्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रको शिक्षालाई परिवर्तन गर्ने नीति निर्माणमा सतर्क रहनुपर्दछ । मुलुकका निम्ति जिम्मेवार रहने व्यक्ति नीतिनिर्माण तहमा आउनुपर्दछ ।
१५) हाम्रो शिक्षामा सुधार गर्न जनतालाई बुझाउन नसकिएका मह¤वपूर्ण कुरा के हुन् ?
— जसले लागू ग¥यो उनैले बुझ्न सकेका छैनन् । गलत बुझेपछि जनतामा पनि गलत बुझाइ पर्ने नै भयो । शिक्षासँग सम्बन्धित नीति–नियमलाई राम्रोसँग बुझ्न र बुझाउन सक्नुपर्दछ । बुझाइमा ध्यान दिन नसकिएको अवस्था छ ।
१६) के अहिले दिइएको शिक्षामार्फत शिक्षामा सुधार र समाज परिवर्तन होला ?
— हाम्रो शिक्षामा जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पर्याप्त कुराहरु छैनन् । यहाँको शिक्षाको कमजोर पक्ष भनेको श्रमलाई अनादर गर्ने हो । विदेशमा श्रमलाई सम्मान गरिन्छ । विदेशमा १०+२ पास गरेपछि विद्यार्थीले हप्ताको २० घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ श्रमको उचित सम्मान हुन्छ । हामीकहाँ पनि श्रमलाई राम्रो सम्मान हुने शिक्षा हुनुपर्दछ ।
१७) तपाईं शिक्षाको विकासका लागि धेरै लामो समयदेखि लागिरहनु भएको छ । शिक्षालाई लिएर विभिन्न आलोचनाहरु गर्ने गरिन्छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईंलाई त्यस्तो आलोचनाको प्रतिवाद वा खण्डन गर्ने स्वतन्त्रता कत्तिको छ ?
— छ । मनमा लागेका कुरा भन्दछन् । मात्र कतिले सुन्दछन् त कतिले सुन्दैनन्, यत्तिमात्रै हो । शिक्षासम्बन्धी आफ्ना सत्य कुरा सबैले बोल्न पाउनुपर्दछ । म यत्तिमात्र भन्दछु– धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्ने शिक्षा नीति ल्याउनुपर्दछ ।
१८) हाम्रो शिक्षालाई कसरी सिकाउन सकिएमा त्यसमा दिगोपन आउला ?
— गर्दागर्दै र भन्दाभन्दै गर्न सकियो भने त्यो दिगो रहन्छ । मनोक्रियात्मक पक्षमा आफैँले गर्न सकिने हुनुपर्दछ । शिक्षा व्यावहारिक र आन्तरिकरुपमा प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्दछ । जस्तोः साइकल चलाउने प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ ।
१९) शिक्षालाई विश्वसनीय बनाउन सबैको सहमति छ त ?
— सबैको सहमति छैन । शिक्षामा निष्पक्ष र योग्य शिक्षकहरु भए भनेमात्र लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । शिक्षक सबैभन्दा मह¤वपूर्ण माध्यम हो, तर हामीकहाँ पार्टीका झोलेहरु मात्रै हाबी भएका छन् ।
२०) वर्तमान अवस्थामा शिक्षाको स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
— हाल देशमा शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न खोजिँदै छ । कसैका लागि शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भने त्यो हाम्रा लागि प्रयोगमुखी हुँदैन । शिक्षा नीतिलाई सबैले समर्थन गर्न सक्नुपर्दछ । राजनेताहरु देश र शिक्षा बिगार्नमा अगाडि आए । उनीहरुमा शिक्षाको प्रभाव पर्न सकेन । राष्ट्रिय चिन्तन नै शिक्षा सुधारका लागि नभएकाले गुणस्तर घट्दै गएको छ । अहिलेको हाम्रो शिक्षा अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छ । देशी तथा विदेशी शक्ति हाम्रो शिक्षा, संस्कृति, भाषा र साहित्यको विध्वंसका लागि लागिपरेका छन् । शिक्षाको नीति के हुने भन्नेबारेमा कुनै गन्तव्य नभएको हुँदा शिक्षा अल्मलिएको अवस्थामा छ । अलिअलि शिक्षा तयार गरिएको छ, त्यो देशका लागि होइन अप्रत्यक्षरुपमा विदेशीको लागिमात्र । हाम्रो शिक्षाको आधार संस्कृत र नैतिक शिक्षालाई सरकारले त हटाई नै सकेको छ । समाजका अगुवा र नेताका छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएका र मुलुकको बागडोर सम्हाल्न पाएकोमा मात्र गौरव महसुस गर्ने अवस्था छ ।
२१) कस्ता प्रकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु समावेश भएमा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुोला त ?
— राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई सिरानीमा राखेर राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय कुन तहलाई हुनुपर्दछ, त्यसको स्पष्ट किटान गर्नुपर्दछ । सबैले आआफ्ना तहमा शिक्षा सुधारका लागि जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।
२२) शिक्षा र साहित्यका बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ?
— राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, किनकि शिक्षामा गहनता ल्याउन त्यसलाई साहित्यले सहयोग गर्दछ । साहित्यले समाजको आवश्यकता पूरा गर्दछ । शिक्षाले नयाँ विचार र सिद्धान्तको सिर्जना प्रस्फुटन गराउन सहयोग गर्दछ । साहित्यलाई माझ्न शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । शिक्षा भयो भने साहित्य निख्रेर आउँछ । यी दुवै एकअर्कामा सम्बन्धित छन् ।
२३) नेपालको शिक्षामा राजनीतिको प्रभाव कस्तो छ ?
— राजनीतिक गतिविधिले शिक्षा क्षेत्र नराम्रो र संक्रमणको अवस्थामा छ । त्यसले शिक्षामा विकृति र विसंगति ल्याएको छ । अनुशासन, आचरण, मर्यादा, नैतिकता र मानवीय मूल्यलाई भुलिएको छ । शिक्षामा असल जग खडा गर्ने नीति र संस्कृत शिक्षालाई सिध्याइएको छ । नामोनिशान नै मेटाई सकिएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ । यी सबै राजनीतिका नै उपज हुन् ।
धादिङमा स्क्रब टाइफस र डेँगुको प्रकोप